Mogadishu Journal » Kooxo ku loollamaya doonista laacib muhiim u ah Manchester United
Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay diyaarineysaa dalab ay u gudbiyaan kooxda Manchester United, si ay kaga soo qaataan Marcus Rashford, sida ay Sunday Express werrineyso.
Xiddigga dhaliyay goolka koowaad ee xukunka Ole Gunnar Solskjaer kullankii 5-1 Cardiff kaga adkaadeen ayaa si aad ah mustaqbalkiisa shaki loo gelinayay, maadaama horumarka uu sameynayo iyo fursad la’aanta ka heysatay Old Trafford ay ahayd mid aad u kala fog.
Laacibka reer England ayaa waxaa si aad ah loola xiriiriyay kooxaha AC Milan iyo Real Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, haddii laacibkan uu noqdo mid la heli karo, Barca ayaa dooneysa inay geeyaan garoon ka Camp Nou.
Inkastoo ay arrin gaar ah noqon doonto sida uu fursad uga helo macallinkan ku meel gaarka ah ee Solskjaer, haddana bartilmaameed xooggan ayuu u yahay Barcelona.
21-jirkan kasoo qalin jebiyay kuliyadda Manchester United ayaa waxa uu dhaliyay shan gool horyaalka Ingiriiska, waxaana uu u baahanyahay inuu si joogto ah u ciyaaro.
Waxaana uu hadda dalabaad ka helayaa Barcelona oo dooneysa inay beddel kaga dhigto Luis Suarez, Milan iyo Real Madrid, inkastoo Barca ay tahay kooxda ugu horreyso loollankiisa.